Fanavahana ireo vondrom-piarahamonina anjorom-bàla ao India tsy hahazo torohay natao ho an’ny rehetra · Global Voices teny Malagasy
Vao mainka miteraka fanilihana bebe ny rafitra amin'izao fotoana izao
Voadika ny 14 Febroary 2020 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, українська, Italiano, English, Français, Español, English
Fakàna torohay eny ifotony ao Goa, India (Veethika Mishra, CC-BY-SA 4.0)
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Yoti, ampahany amin'ilay Digital Identity Fellowship an'i Subhashish Panigrahi. Navoaka ho an'ny Global Voices.
Natolotra ho isan'ireo làlana iray ho an'ny governemanta ilay tetikasa Digital Identity hanamoràny ireo dingana sy hamatsiany tolotra ho an'ny vahoakany amin'ny fomba mahomby kokoa. Na izany zany aza anefa, ao India ary manerana izao tontolo izao, mampirongatra fanontaniana maro momba ireo zo nomerika sy ny fanilihana ara-tsosialy ireny fandaharanasa ireny noho ny mety hisian'ny fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainan'ny vahoaka.
Aadhaar ao India dia tarehimarika 12 tokana natao ho famantarana dizitaly, ka mba hahazoan'ny olona mahazo izany dia tsy maintsy omeny ireo ny rakitra ara-biometrikany sy ara-demografikany. Na dia tsy mbola namoahan'ny fitsaràna antampony didy ao anatin'ny lalam-panorenana ho tsy maintsy ataon'ny olona rehetra aza ny Aadhaar, betsaka ireo tombontsoa samihafa ho an'ny fiahiana ara-tsosialy no efa mifamatotra amin'izany sahady ary ireo andrim-panjakana sy ny tsy miankina aza efa nanomboka nampiasa ho azy ny Aadhaar ho toy ny mari-panamarinana. Ahiana hitera-doza ho an'ny zon'olombelona ny Aadhaar, indrindra ny amin'ny tsiambaratelo sy ny filaminana, ary nokianina ho fitaovana fanarahamaso faobe. Io no tena olana sedrain'ireo olontsotra izay nolavina ny zon'izy ireo hahazo maimaimpoana ny sakafon'ankizy any an-tsekoly rehefa tsy mahavita mampiseho maripamantarana Aadhaar-ndry zareo.
Inona avy ireo dingana lalovan'ny mpikambana tsotra avy amin'ny vahoaka rehefa hiditra haka torohay iankinan'ny ain-dehibe omen'ny governemanta indiana? Ahoana raha io olona io mihitsy no tsy mahay afatsy ny fiteny nentim-paharazana izay tsy fiteny ofisialy any amin'ny faritra misy azy na tsy mahay mamaky teny, na manana olana ara-pahitana, na iharan'izao karazana famoretana ara-drafitra isan-karazany rehetra izao?
Mba hahitàna ny fidirana amin'ny torohay ho an'ny daholobe any India avy amin'ny fomba fijerin'ny fanilihana ara-piarahamonina , ny zon'ny teratany sy ny fiteny, ny kilema ary ny sakana ara-teknika, nanaovan'i Subhashish Panigrahi fanadihadiana ny amin'ireo vondrom-piarahamonina anjorom-bàla sy sy ireo mpifanome tàn-tsoroka amin'izany (amin'ny fiteny, mpikatroka ary manam-pahaizana ara-teknika) izay fanalahidin'ny adihevitra momba ny maripamantarana nomerika.
Ny fahasamihafana amin'ny fiteny ao India
India no ahitàna olona mitàna ny netim-paharazana be indrindra eto an-tany. 22% amin'ny tany ao aminy no ipetrahan'ny vondron'olona teratany 705 (104 tapitrisa eo ho eo, izay ny 8,6% ny mponina araka ny fanisambahoaka 2011).
Miteny fiteny 419 samihafa ireo vondrona ireo, ary am-bava ny ankamaroan'ireo fiteny ireo. Amin'ireo fiteny 780 iresahana manerana an'i India dia 22 ihany no eken'ny lalampanorenana ho ofisialy. Manandanja io fankatoavana io satria mamela azy ireny ho azo ampiasaina any amin'ny fitantanana. Na maro amin'ireo fiteny 419 ireo aza no takatry ny rehetra, betsaka ihany koa no tsy toy izay. Amin'izao fotoana izao, ny tranonkala Aadhaar ofisialy (uidai.gov.in) dia nadika tamin'ny ampahany ho amin'ireo fiteny 12 sy ireo fiteny ofisialy 22, ary tsy misy fiteny nentim-paharazana na iray aza.
Andalana faha-2 amin'ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona…nanamarika fa zo fototra ny fahazoana torohay amin'ny fiteny ampiasaina.
Andalàna faharoa ao amin'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zon'olombelona, antontan-kevitra tramin'ny 1948 izay novolavolain'ireo solontena samy nanana ny rafitra lalàna sy kolotsaina samihafa namolavolàna azy, izay manamarika fa zo fototra ny fahazoana torohay amin'ny fiteny ampiasaina.
Tanaty antsafa iray vao haingana, nanamarika i Dr. Mandana Seyfeddinipur mpahay momba ny teny – izay mitarika amin'izao fotoana izao ny Endangered Languages Archive (ELAR) (Tahitin'ireo Teny Tandindonin-doza) ao amin'ny School of Oriental and African Studies (SOAS), Anjerimanontolo ao Londona – nilaza hoe, “tsy ho afaka handefa fotsiny bokikely fampahafantarana amin'ireo fiteny be mpampiasa ianareo mandritra ny hamehana nateraky ny fiparitahan'ny valanaretina iray”. Nasian'ny tsindrimpeo misimisy kokoa tamin'ny fanomezana ohatra mahakasika ireo olona 10-12.000 miaina anaty faritra iray mirefy 10 km2 ao amin'ny faritra Lower Fungom any Kamerona iza, isanandro vaky, mampiasa fiteny miisa sivy eo ho eo. Rehefa voafaritr'i Dr. Seyfeddinipur ny olana amin'ny famoronana sy fanavaozana ny torohay aminà) fiteny 7.000 iresahana manerana izao tontolo izao, itrikitrihany ny filàna mamantatra ny fiteny izay takatry ny vondrompiarahamonina tsirairay ao anaty fari-pitantanana iray — na teratany io na teny fampiasan'ny maro an'isa — rehefa mandrafitra torohay ho an'ny daholobe.
Raha lasa rafi-panamarinana tsy azo ihodivirana ny Aadhaar eo amin'ny sehatry ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, amin'izao fotoana izao ny tranokala ofisialin'izy ireo dia tsy mbola manana torohay azo henoina ho fanampiana ireo miteny ny fitenin-drazana na koa ho an'ireo olona tsy mahay mamaky teny. Tsy sakana eo amin'ny fiteny fotsiny ihany no asehon'izany fa sakana amin'ny fidirana ara-nomerika ihany koa. Zava-dehibe ny manamarika fa i India no manana olona betsaka indrindra manerantany (15 tapitrisa) izay manana tsy fahatomombanana eo amin'ny maso sy mpamaky efijery manampy ny olona handre izay soratra eo rehefa miditra amin'ny fampahalalana mifototra amin'ny lahatsoratra izay tsy hita amin'ny ankamaroan'ny fiteny.
Ny tsy fahampiana loharanom-pahalalana amin'ny fiteny sy nomerika no tena isan'ny mibahana toerana betsaka amin'ny fikarohana ifotony ao India.
Ireo fanontaniana fototra apetraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina voakasik'izany
Mba hahazoana torohay natao ho an'ny daholobe, ahoana no ataon'ireo olona ao amin'ny vondrom-piarahamoninao izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mahantra, manana olana ara-pahitana (na manana fahasembanana hafa) ary ireo manana fahasamihafana ara-tsosialy? Inona no olana atrehan'izy ireo ary inona no tsy ampy ?
Ahoana no fahitànao ny teknolojia ao ambadiky ny Aadhaar amin'izao fotoana izao ? Inona no azo atao hanatsarana ny fisokafany, ny fangaraharana ary ny fandraisany andraikitra ?
Inona avy ireo karazana fanavahana samihafa izay atrehan'ireo mpampiasa marobe amin'ny fampidinana ilay fandaharanasa nomerika ao India sy manerana izao tontolo izao ? Inona avy ireo fiantraikany raha ny fiarovana ny zon'olombelona no jerena?
Azo atao ve ny manome fampahalalana atao amin'ny fitenin-drazany ho an'ny olona? Inona avy ireo fanamby amin'ny fanatanterahana azy ary inona no azo atao mba hahazoana antoka fa afaka mahazo ny torohay tena ilainy indrindra ny olona rehetra?
Ny azo notsoahana avy amin'ireo antsafa natao
Ny rafi-pidirana ankehitriny amin'ny fahazoan'ny daholobe torohay dia vao mainka miteraka fanilihana bebe kokoa an'ireo olona antitra, na manana aretina sasany, kilema, miteny amin'ny fiteny tsy ofisialy, na miatrika famoretana ara-tsosialy hafa, miatrika fanilikilihana avo kokoa.
Betsaka ny ezaka natao hanabeazana ireo mpampiasa momba ny fampiasàna ireo angondrakiny manokana, ary ny tena mahazava-dehibe ny fanangonana izany rakitra izany, indrindra fa ny mahazava-dehibe ilay KYC (Know Your Customer – na ny hoe fantaro ny mpanjifanao), fomba fanarahamaso mora kokoa sady azo itokisana kokoa.
Manome vahana ireo olona efa mahazo tombony hatrizay ireo fotodrafitrasa ara-teknika (sy lehibe kokoa), ary io no miteraka fanilihana ara-drafitra midadasika kokoa raha raisina amin'ny fomba fijery ny sehatry ny fahazoana torohay. Ny ankamaroan'ireo fomba fampiasa nampidirina ao amin'ny sosona fanamarinan'ny Aadhaar dia ireo tena mahafehy solosaina sy aterineto avo lenta ihany no afaka mampiasa azy, fa tsy ny sarambaben'ny olona.
Zara raha mahay taratasy ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny firenena, indrindra any amin'ireo fiteny maro an'isa izay afaka ahazona ny ankamaroan'ny torohay ho an'ny besinimaro. Tena olana goavana io.
Fari-pikarohana lavidavitra kokoa
Endri-paniliana sosialy hafa – ao anatin'izany ny maha-lahy sy ny maha-vavy ary ny resaka firaisana izay misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny maripamantarana ara-dizitaly ao India.
Ahoana no ahafahan'ny vondrom-piarahamonina manana Loharano Misokatra sy Maimaimpoana handray anjara amin'ny fiantohana ny fisokafana, ny fangaraharana ary ny fandraisana andraikitra – zavatra izay tsy hita amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatra teknika ary namboarina indrindra miaraka amin'ny eritreritra maha-“tompony“.
Ireo fiantraikany eo amin'ny tsiambaratelo sy ny resaka fiarovana ary izay azo atao hanatsarana ny zo ara-nomerika sy ny zon'olombelona amin'ireo vondrona isankarazany voahilikilika.
Ireo fanao tsara indrindra avy amin'izao tontolo izao ahafahana manamaivana ny karazany fanavahana ara-drafitra.